2017-11-05 | fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
2017-11-05	Leaveacomment 158 Views
काठमाडौँ,१९ कार्तिक । नेपाली फिल्मकी सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बन्नुभएको छ । यदी नयाँ शक्ति पार्टीले देशभर खसेको कूल मतबाट समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए उहाँ प्रतिनिधि सभा सांसद बन्नुहुने छ । नयाँ शक्ति नेपालले आफ्नो बन्दसूचीको एक नम्बरमा करिश्मा मानन्धरलाई राखेको छ। उहाँ पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुहुन्छ । पछिल्लो ...
2017-11-05	Leaveacomment 84 Views
१. कागती पानीबाट गर्नुहोस् दिनको सुरुवात दिनको सुरुवात कागती पानीबाट गर्नुहोस् । पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम गर्न यो घरेलु उपाय प्रभावकारी हुन्छ । तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंको मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्नमा पनि मद्दत मिल्छ । २. खैरो चामलको भात खानुहोस् यदि तपाईं भात ...
2017-11-05	Leaveacomment 46 Views
घर र कोठाकोे सौन्दर्यका लागि विभिन्न थरिका बत्तिहरुको प्रयोग (लाइटिङ) गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । घरमा प्रयोग गरिने यस्ता धेरै प्रकाश दिने तथा रङ्गीन लाइटिङले स्वास्थ्य असर पार्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सेल प्रेस जर्नलमा प्रकाशित ‘करेन्ट बायोलोजी’ लेखमा कृतिम प्रकाशले स्वास्थ्यमा हानी हुने उल्लेख गरिएको छ । सो लेख अनुसार दिन र रातको उज्यालोको प्राकृतिक सर्कल मानव शरीर ...
2017-11-05	Leaveacomment 56 Views
पोखरा, १९ कार्तिक । डाइनामो जडित सानो मेसिन, मात्र ५७ किलोग्रामको तौल, बगेको सानो कुलो, पोखराको बिरौटोमा रहेको रामन्दिरनेरको नहरमा राख्नासाथ डाइनामो घुमिहाल्यो । राममन्दिर क्षेत्र उज्यालो बनिहाल्यो । नेपाल सरकार, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र,जापानिज सहयोग नियोग ( जाइका ), पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा इवासेईको संयुक्त पहलमा राममन्दिर प्राङ्गणमा पिको हाइड्रोपावर जेनेरेटर ( काप्पा ) को ...
2017-11-05	Leaveacomment 64 Views
काठमाडौं,१९ कार्तिक। अटोमेटिक पेस्तोल र ५१ राउन्ड गोलीसहित १५ गते राजधानीमा दुई भारतीय पक्राउ परेको भोलिपल्टै पोखराबाट पनि तीन जना भारतीय नै पक्राउ परे । पोखरामा पक्राउ परेका उनीहरू भारतमा हत्या, अपहरण र असुलीमा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति भएको प्रहरीको भनाइ छ । राजधानीको कमलादीस्थित हेरिटेज प्लाजामा रहेको ज्याक डेनिस डान्स बारमा गोली चलाएपछि भारत लुधियानाका जसवीर सिंह र देवेन्द्र ...
2017-11-05	Leaveacomment 68 Views
झापा,१९ कार्तिक । छोराका लागि बुहारी भित्र्याउने प्रचलन पूर्वीय संस्कृतिमा सामान्य हो। नेपालको पूर्वी तराईमा बसोवास गर्ने सन्थाल समुदायमा भने छोरीका लागि ज्वाइँ भित्र्याउने चलन छ। पाँच वर्षअघि झापा गाउँपालिका-१ की २० वर्षीया सुमी हेम्रुमसँग मागीविवाह गरेका खयरबारी झापाका २५ वर्षीय लाल बेस्रा ससुरालीमै घरजम गरेर बसेका छन् । हेम्रुमसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेपछि बेस्राले आफ्नो थातथलो नै त्याग्नुपर्‍यो।बेस्रा दम्पती सन्थाल समुदायमा नौलो ...
2017-11-05	Leaveacomment 76 Views
काठमाडौं, १९ कात्तिक । सुनको भाउ आइतबार तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन आइतबार तोलाको ५५ हजार ३ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन शुक्रबार तोलाको ५५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको भाउ पनि आइतबार तोलामा १० रुपैयाँ घटेर तोलाको ७ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
2017-11-05	Leaveacomment 47 Views
विराटनगर, १९ कात्तिक । एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी मोरङ जिल्लामा ६ लाख ४४ हजार ७८२ मतदाता छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगको कार्यालयले मतदाता नामावली संकलनमा ७० हजार २८२ मतदाता थपेपछि मतदाताको सो संख्या पुगेको हो । छ वटा संसदीय क्षेत्र भएको मोरङमा सबैभन्दा बढी क्षेत्र नं ३ मा एक लाख २७ हजार ४९५ मतदाता छन् ...
2017-11-05	Leaveacomment 78 Views
डडेलधुरा,१९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव लड्दैहुनुहुन्छ, र, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लाई चुनाव हराउन कस्सिएर लग्नुभएको छ वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एवं माओवादीका युवा नेता खगराज भट्ट । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले निर्वाचनमा पराजय भोगनुभयो भने यसबाट नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, देशकै राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुनेछ । तर, अझ योभन्दा बढी शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा चुनाव ...
2017-11-05	Leaveacomment 49 Views
कात्तिक २४ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘रोमियो’को एक वियोगान्त गीतको भिडियोमा हसन नीशाको यादमा तड्पिएका हुन् । शंकर कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा मेलिना मानन्धर, हसनराजा खान, नीशा अधिकारी, ओसिमा बनु लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । कुर्बान अली खान र अमृता लिम्बुको आवाज रहेको गीतमा कुर्वानकै शब्द तथा संगीत छ । एचआरके प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा मिलन ...